Soomaaliya ma khatar ayay ku jirta! - Ahmed Abdihadi
Soomaaliya ma khatar ayay ku jirta!
Kooxda Hadda talada haysa waxay mashquul ku yihiin sidii ay kursiga u haysan lahaayeen, haddana ku soo laaban lahaayeen. Laakiin amni iyo dibo hagaajin caqliyeed, iyo dib dhis dal waddadii ma hayaan.
Waxay aad u isticmaalaan saxaafadda, waxayna aad u yaqaanaan sida shacabka loo indhasaracaadiyo.
Mucaaradku, waa kooxo ka taajiray markii hore ee ay dalka hayeen, hadda wax mashruuc ah oo ay u hayaan oo haddii ay dib u helaan awoodda ay dalku ku soo kordhinayaan ma jirto.
Markaad la shaykaysto xigmad iyo siyaasadu midna ma hayaan.
Dhallinyarada waxbaratay inta badan, gaar ahaan kuwa fahanka ama waciyigi siyaasadeed leh waxay ka shaqeeyaan hay’adaha caddaanka iyo kuwa QM. Looma ogala in ay fikir ka yeeshan xaaladaha dalka ka jira. Marka waa iska daawawdayaal arrimaha dalka ka jira. Maxaa yeelay, haddii arrima siyaasadeed galaan shaqadooda su’aal ayaa saaray.
Bulshada rayidka, gaar ahaan macaahidda magaca cilmi baaris u taagan, waxa ay ka shaqeeyaan ma ah wax ay ayagu ku fikiraan ama Soomaaliya la xiriirta ee qolooyin caddaan ah ayaa qoondoonyin siiya, yiraahdana “arrintan cilmi baaris ka soo sameeya”!.
Maxaa yeelay, dowlad ama hay’ado Soomaaliyeed oo cilmi baaris maalgashada, xitaa fahansan ma jiraan inta aan ka ogahay.
Qolada kali ah ee qorshooyin leh, lacagta ay dadka ka aruursadaan ku shaqeeya,waxna ku laaya waa Alshabab.
Waxaa kaloo jira hay’ado iyo kooxa ka taajiray duruufta ay Soomaaliya ku sugantahay oo mashaariic indhasaracaad u badan ka shaqeeya.
Marka la soo koobo cid danta Soomaaliya ee hadda ama mustaqbalka ka shaqaynaysa si muuqata anigu ma arag.
In ay saas wax yihiin waxaan idiinku caddayn karaa, ma jiro dal xilligan casriga ah ee la joogo 30 sano sidan ah.
Hadda waxaan aad uga cabsanayaa haddii ay sidan ku sii socoto xitaa in Soomaaliya dowlad ahaan khariidada ka baxdo. Maxaa yeelay, kilalka Soomaalida, iyo Gobolka waqooyiga Kenya (NFD) Mar ayay dhul Soomaaliyeed ahaayeen.
Sidoo kale, sharciga caalamiga ah ee hadda xuduudaha ilaaliya khatar ayuu ku jiraa, maxaa yeelay yurub ee Woqooyiga America oo adduunka laga hoggaamin jiray, waxay gacanta u galayaan dad aan sharciga caalamiga ah ixtiraamaynin oo loo yaqaano( Populist). Eeg Maraykanka iyo Ingriiska.
Haddaba, Halka khiyaar ee furan wuxuu yahay in la raadiyo hoggaamiye aan fulay ahayn ama aan ajaanib maqaar saar u ahayn oo dalkan badbaadiya.
Marka dhallinyarada madax bannaan ee wacyiga leh waxaan ka codsanayaa in ay u diyaar garoobaan in hoggaan dalkan loo helo.
Dalkan waxa kali ah ee wax lagaga qaban karo waa in wacyi la yeesho, fulaynimada la iska daayo.
Waa in afarta sano ee soo socota aan dalkan la wanjalin mar kale.
Haddii kale, gacanta ayuu ka baxayaa.
Canshuurta Guryaha Moqdishu sideebaa loo qaadaa?
Maxay Muqadishu amni darro u tahay 30 sano!